Muuri News Network » SAWIRO & COD: Danjire Kay oo gurigiisa ku booqday Faroole & kulan Xasaasi ah.
SAWIRO & COD: Danjire Kay oo gurigiisa ku booqday Faroole & kulan Xasaasi ah.
Waxaa maanta Magaalada Garoowe ku shiray Madaxwaynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole & wakiilka Qaraamada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjire Nicholas Kay oo wakahtigii shaqada Soomaaliya ka dhammaday, waxaana kulanka ay qaateen uga wada hadleen arrimo badan oo khuseeya Soomaaliya.
HAKAAN RIIX OO DHAGEYSO
Kulanka oo soconayay ku dhawaad 30 daqiiqo ayaa waxaa arrimihii sida wayn loosoo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa doorashada Soomaaliya, iyadoona Cabdiraxmaan faroole sidoo kale uu sagootiyay danjire Nicholas kay oo safar galaya.
Madaxwaynihii hore ee Dawladda punt;and Dr. Cabdiraxmaan Shiikh Maxamed maxamuud Faroole ayaa sheegay inuu dajire Kay uga mahad celinayo booqashada uu ugu yimid gurigiisa.
Danjire Nicholas Kay oo hadal kooban jeediyay ayaa marka hore u mahad celiyay madaxwaynihii hore Puntland qaabilaadiisa, wuxuna intaa ka dib sheegay inuu xalay la kulmey madaxwayne Cabdiweli Cali Gaas.
Kay ayaa sheegay mudaddii uu xafiiska joogay inay wax badan qabsoomeen oo ku aadan la shaqaynta dowladda xaga siyaasada, ka taageerida sidii loo dhisi lahaa mamuladda dalka iyo la-dagalanka kooxda Al-Shabab, wakiilkani wuxuu sheegay hadda inuu u muuqdo mustaqbal wanaagsan oo Soomaalidu gaarayso, ayna inta badan magaalooyinka waa weyn lagu qabtay shirar wadatashi oo shacabka lagu waydiinayay doorashada soo socota siday noqon doonto.